Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Sean Longstaff Child Akụkọ Plus na-enweghị ihe ọmụma eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "New Michael Carrick“. Anyị Sean Longstaff Child Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Akụkọ Sean Longstaff Child- Akụkọ ahụ.
Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo banyere ndu ndu ya, ihe ndi ozo, akwukwo ndu tupu aha ya, bilite na akuko akuko, nmekorita, ndu onwe onye na ndu ndi ozo.
Ee, onye ọ bụla maara maka ịrị elu ya ka ọ bụrụ onye ama ama na Newcastle, ihe egwu mere ka Manchester United rịọ maka mbinye aka ya.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na -atụle akụkọ ndụ Sean Longstaff nke bụ ihe na -atọ ụtọ. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ banyere Sean Longstaff - Akụkọ mmalite ndụ na ezinụlọ:
Malite, aha ya zuru ezu; Sean David Longstaff. Sean Longstaff dịka a na-akpọkarị ya, na 30th nke October, 1997 ka nna ya, David Longstaff na nne ya, Michelle Longstaff n'obodo Newcastle n'elu Tyne, United Kingdom.
Sean toro n'akụkụ nwanne ya nwoke nke obere Matthew n'ụlọ ezinaụlọ egwuregwu. N'ịbụ onye tolitere, Sean hụrụ nne na nna ya ka ha na -etinye aka n'egwuregwu.
-ekwu okwu nke Egwuregwu, Ọ bụghị naanị maka ịhụnanya ha maka Newcastle United MA ice hockey, cricket na netball.
Sean Longstaff na nwa nwoke Nwanna-Matthew.
Ị maara?… Nna Sean Longstaff bụ David onye bụbu onye egwuregwu hockey Great Britain nke gosipụtara ihe karịrị ugboro 100 maka ndị otu mba. Ọzọkwa, nne Sean Longstaff bụbu onye egwuregwu bọọlụ bụkwa ọkaibe na egwuregwu ahụ.
Na -ekpe ikpe site n'ọrụ nne na nna ya, ị ga -amata na ọbara egwuregwu na -esite na akwara Sean Longstaff.
N'ihi nkwenye nna ya maka ọrụ mba na klọb, ọnụnọ ezinụlọ Sean Longstaff na England adịteghị aka.
N'oge ụfọdụ n'oge ọ bụ nwata, Sweden ghọrọ mba nke abụọ ya. Nna Sean David gụrụ egwu maka otu akụkụ dị elu na Stockholm, Sweden.
Sean Longstaff Childhood Akụkọ - Nkụzi na Ọrụ Buildup:
Sean Longstaff zụlitere usoro mmụta egwuregwu dị ka nwata. Nke a ka o weere n'oge a.
Ejikọtara nkịta nke taa so na ahụmịhe nwata ya ebe ọ nọrọ ọtụtụ oge ya na -egwu hockey na ice ice Sweden.
Little Sean Longstaff na-amụ ahịa nna ya.
N'oge a (dị n'elu) n'oge ọ bụ nwata, ọ hụghị Sean Longstaff chọrọ ịghọ ndị nrịba ama. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ịgbaso nzọụkwụ nna ya iji bụrụ kpakpando hockey ọkachamara.
N'agbanyeghị ice hockey na Netball bụ nnukwu azụmaahịa, ndị otu ezinụlọ Longstaff niile ka nwere ịhụnanya maka Newcastle United, nke siri ike ịhapụ.
N'ezie, nne ya, nna ya, nwanne ya nwoke, nwanne ya nwanyị, nwanne nna ya na nwanne nne ya bụ ndị na-akwado Magpies ogologo ndụ niile. N'oge ụfọdụ, nna Sean Longstaff kpọghachiri ezinụlọ ya na England.
Mgbe Sean Longstaff laghachiri na Sweden site na Sweden, ọ malitere inweta ọzụzụ agụmakwụkwọ site na Tynemouth Cricket Club. Ná mmalite, ọ nyeere ndị òtù ya aka imeri ihe mbụ ya.
Afọ ndị mbụ nke Sean Longstaff na Cricket. Ebe E Si Nweta Oge Ndụ.
Mgbe ọ na -egwu cricket, Sean Longstaff gakwara ụlọ akwụkwọ sekọndrị John Spence Community. N'ụlọ akwụkwọ, ọ hụrụ football n'anya wee hụ onwe ya ka ọ na -agbahapụ cricket.
N'oge ahụ, ndị nkuzi ya n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị maara na a kara Sean Longstaff maka nnukwu ihe ka ha na -ele ya ka ọ na -etinye nka na mpaghara egwuregwu bọọlụ ha.
Yabụ mgbe Longstaff kpọbatara oku ka ọ bịa ule na agụmakwụkwọ Newcastle United, nganga ha enweghị oke.
Sean Longstaff Biography Eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite:
Sean Longstaff dị umeala n'obi, nwere nnukwu obi ike mgbe ọ dị afọ 9 hụrụ onwe ya ka ọ na -agafe ụzọ wee debanye aha ya na mahadum Newcastle ebe enyere ya ọkwa iji gosipụta talent ya.
N'ibido klọb ahụ, Sean nwere ike bụrụ otu ogo na ogo dịka onye ọ bụla nọ n'okpuru ọkwa 9.
Ndụ Sean Longstaff Early Career Life.
Agbanyeghị, ọ were obere oge tupu ọ malite iwulite agwa ya, na -atụgharị bụrụ ihe dị egwu na usoro ahụ. N'oge a, Sean Longstaff ghọrọ okporo ụzọ dị n'ihu ndị nwunye ya n'ihe banyere omume na nkwụsi ike, na ikike nka.
Ihe ngosi a hụrụ ya ka ọ na -enwe ọganiihu n'ofe afọ dị iche iche ma na -eme onwe ya ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ.
Sean Longstaff Biography - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe ọ kwụsịrị ọrụ ntorobịa ya na Newcastle, Sean Longstaff chere na oge ruru ya ka o mee mkpebi siri ike.
O kpebiri ịhapụ England na mbinye ego na Kilmarnock Football Club, nke a na -akpọkarị Killie. Nke a bụ ndị otu egwuregwu bọọlụ Scottish nke dị n'obodo Kilmarnock, East Ayrshire.
N'ụlọ ọgbakọ ahụ, Sean Longstaff ji oge dị ukwuu na-arụ ọrụ n'ịdọ aka ná ntị ya na ịghafe usoro nke mesịrị ghọọ ike ya.
Okporo ụzọ Sean Longstaff na-ewu ewu Akụkọ.
Ịbụ nwa akwụkwọ na -arụsi ọrụ ike na onye na -echebara ihe echiche kwụrụ ụgwọ ka a kpọrọ Sean Longstaff maka Blackpool ka ọ gbazinye ego ọzọ.
Mgbe ọ na -egwuri egwu maka klọb nke oke osimiri, Longstaff malitere igosipụta etu o siri nwee ike ịga n'ihu.
Ịhụ mmezi ndị a malitere ịnwa Newcastle banyere iche echiche banyere nlọghachi omume nke nwatakịrị nwoke n'onwe ya site na mkpịsị aka ya.
Sean Longstaff Biography - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Mgbe ha nụsịrị ozi ọma nke onye mgbazinye ego ha na -enwu na Blackpool, Newcastle United kpebiri icheta Sean nke ha site na mbinye ego ahụ.
Nke a mere n'otu oge Rafa Benitez na-enwe nsogbu nke nsogbu midfield - Jonjo Shelvey na Mo Diame,
Enyere Sean Longstaff ohere na ọ masịrị ya ozugbo. Nke a meteoric ịrị elu ama ama hụrụ ya ka ọ bụrụ onye nwere mmụọ na-atọ ụtọ kachasị pụta na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya mgbe Michael Carrick gasịrị.
Okporo ụzọ Sean Longstaff na-ewu ewu Akụkọ - Globọchị ebube dị na Blackpool.
Ike Sean Longstaff nwere ike ịme egwuregwu ka ọ dị mfe ka ndị Fans mara ya. O weputara udiri egwu nke jikọtara ịdị mma nke Rolls Royce na injin nke Mustang, na-eme ka ndị Newcastle na-abụ abụ otuto banyere ya.
Nnukwu ntụgharị nke ihe ịga nke ọma Sean Longstaff bịara na oge 2018/2019 bịara mgbe ọ meriri ntaramahụhụ nke nyere Newcastle mmeri 2-1 na Manchester City na Jenụwarị 2019.
Kemgbe ụbọchị ahụ, aha ya nọ na mbufe radar nke klọb kachasị elu, n'etiti ha bụ Manchester United. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Sean Longstaff mmekọrịta mmekọrịta - enyi nwanyị, nwunye, nwa?
Ndụ ịhụnanya nke ndị na-agba ọsọ ụkwụ nke England bụ ihe na-atọ ụtọ ọtụtụ ndị fan. Obi abụọ adịghị ya, ịrị elu Sean Longstaff na-ewu ewu hapụrụ ndị Fans na-eche ma ọ bụrụ na ihe ịga nke ọma nke ndị egwuregwu bọọlụ jikọtara enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya (nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na o nwere otu, dị ka n'oge ederede).
Ndụ mmekọrịta Sean Longstaff- Ebe E Si Nweta nye KillieFC.com.
Oh ee! o nwere ike ọ gaghị adị mma dị ka David Beckham, ma na ọchị ahụ mara mma na kọlọtọ ya, enweghị ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na Sean Longstaff agaghị abụ osisi vaịn na-ama n'anya nye ụmụ nwanyị.
Dị ka n'oge ederede, ọ nwere ike ịbụ mkpakọrịta ịhụnanya zoro ezo maka ya na enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye ya. Ọ bụ otu nke na-agbanahụ nyocha nke ọha mmadụ nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya bụ nke onwe ya na ikekwe na-enweghị ihe nkiri.
Dị ka n'oge ederede, Sean Longstaff ahọrọ ilekwasị anya na ọrụ ya, ọ chọkwara izere ihe ọ bụla ọ hụrụ na ndụ ya. Eziokwu a na-eme ka o siere anyị ike ịnweta eziokwu banyere ndụ ịhụnanya ya na akụkọ ihe mere eme ya.
Sean Longstaff Ndụ Nke Onwe:
Tingmata ụdị ndụ Sean Longstaff na-egwu n'egwuregwu ga-enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu.
Sean Longstaff Personal Life Eziokwu.
Malite, ọ bụ nwoke dị jụụ, onye ihere na onye obi ụtọ. N'ikwu eziokwu, Sean Longstaff bụ onye nwere ike iguzogide ụdị nrụgide niile na -enweghị mgbagha mmụọ.
Ọ nwere ike tụgharịa aka ya n'ihe ọ bụla ị tụfuru ya, ma ọ bụ cricket, badminton, tennis tebụl ma ọ bụ bọọlụ.
A na - ejikọta ihe niile a na ndụ ọma ya, ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa ya na mgbọrọgwụ ezinụlọ. Sean Longstaff bụ onye ọ na-atọ ụtọ site na nguzozi ya, akara ngosi na ọ bụ ezigbo onye na-ege ntị.
Sean Longstaff LifeStyle:
Sean Longstaff na-enweta ụgwọ ọrụ dị mma site na ọrụ ọrụ ya dị ka ndị na-agba ọsọ. Otú ọ dị, nke a adịghị agafe n'ime ndụ dị mma nke ihe atụ nke dị n'okpuru ebe a.
Eziokwu ndụ Sean Longstaff. Ebe E Si Nweta enyo na MSN
Dị ka n'oge ederede, a naghị ekwe ka Sean Longstaff bie ndụ okomoko dịka imefu ego dị ka onye nzuzu, na-egosi ọtụtụ ụgbọ ala ndị mara mma, ụmụ agbọghọ na uzu. Ọ naghị enwe nnukwu nsogbu ijikwa ego bọọlụ ya na ịchekwa ụfọdụ maka ụbọchị mmiri ozuzo.
Ndụ Sean Longstaff Family:
Ihe ịga nke ọma Sean na-adabere na nzụlite ya na ezinụlọ ezinụlọ ya na agụmakwụkwọ ya na John Spence Community High School na North Shield. Ugbu a, ka anyị nye gị ụfọdụ Ama gbasara ezinụlọ ya.
Banyere Nna Sean Longstaff:
A mụrụ David Longstaff na 26th nke August 1974. N'ikpe ikpe site na ụbọchị ọmụmụ ya, David nwere Sean mgbe ọ nọ gburugburu 23.
David Longstaff n'oge ọrụ ya dị ka kpakpando hockey.
David Longstaff malitere ọrụ ya na klọb nke obodo ya, Whitley Bay Warriors tupu ọ kwaga Sheffield Steelers na 1995, klọb ọ nwere ọtụtụ mmeri na ihe ịga nke ọma n'ọtụtụ egwuregwu na egwuregwu egwuregwu.
Ị maara?… David Longstaff n'oge ya na-eto eto na-enye nwa okorobịa Player of the Year na Superleague Player nke Year onyinye. N'okpuru ebe a bụ foto nke ya n'oge ọ chịrị ụwa dịka kpakpando hockey.
David Longstaff- n'oge ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta HeShootSheScores.
Dị ka n'oge ederede, David Longstaff ka na-arụ ọrụ dịka onye ọkpọ-nkuzi maka Whitley Warriors.
Banyere nne Sean Longstaff:
N'adịghị ka di ya bụ Devid, ọ dị ntakịrị ihe a maara banyere nne Sean Longstaff nke aha ya bụ Michelle Longstaff. Dị nnọọ ka di ya, ọ bụkwa onye egwuregwu na-elekwasị anya ma mee nke ọma na Netball.
Banyere nwanne Sean Longstaff:
Dị ka n'oge ederede, nwanne nwanne Sean Longstaff bụ akụkụ nke ndị otu 23s na Newcastle.
Eziokwu ahụ bụ na ụmụ nwoke abụọ ahụ emeela nke ọma na klọb pụtara n'ụzọ doro anya na ha abụọ nwere nka, n'ihi ụkpụrụ etinyere n'ime ha site na nwata.
Banyere ndị ezinụlọ Sean Longstaff:
Nna Sean David Longstaff bụ nwa nwanne nna onye England mbụ Alan Thompson bụ onye bụ nwanne Sean n'ụzọ nkịtị.
Sean Longstaff Eziokwu Eziokwu:
N'iji tụnyere Declan Rice:
Iji Sean Longstaff tụnyere Chora Ohia. Ebe E Si Nweta Eluigwe
Ị maara?... Dịka n'oge edere, ụfọdụ ndị na-eche na iji Sean Longstaff tụnyere Chora Ohia dị ka iji tụnyere ụda nke Frank Lampard na Paul Scholes.
N'oge ahụ, mgbe Paul Scholes enwere ahụmahụ karịa ma Lampard nwere stats. N'okwu a, n'agbanyeghị na ọ bụ nwata dị obere, Rice bụ onye ọkpụkpọ ahụ nwere ahụmahụ karị, ma Longstaff ejidere onwe ya mgbe ọ bịara n'ụgbọ egwuregwu.
Dị ka n'oge ederede, Longstaff na Rice na-ekwusi ike ugbu a maka itinye ha na ndị otu mba England. Mana ndi oru nta akuko n'oge edere edechaghi otutu ihe banyere umuaka umuaka abuo.
Nchịkọta vidiyo Sean Longstaff:
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ akwụkwọ anyị Sean Longstaff Akụkọ nke a na-akọ na eziokwu efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.